4 waxqabad oo la sameeyo Dayrta dibedda | Bezzia
Maria vazquez | 01/09/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 29/08/2021 23:45 | Waqtiyada firaaqada
Dayrtu waxay la timaaddaa heerkul hoose laakiin weli waa lagu raaxaysan karaa waxqabadyada dibadda. Ma aha in dayrtu timaaddo waa inaan iska daynaa kuwan oo aan isku xirnaa guriga. Way badan yihiin hawlaha la sameeyo dayrta taasi waxay noo oggolaanaysaa inaan ku raaxaysanno keli -yahannada xilligan sannadka ah.
Waxaan ka fikiri karnaa qorshayaal badan oo aan fulin karno sannadka oo dhan laakiin taasi xilliga dayrta waxay leeyihiin midab gaar ah. Hadday tahay shirkad ama keligaa, kuwa jecel isboortiga bannaanka waxay awoodi doonaan inay ku raaxeystaan ​​muuqaallo aan horay loo arag waqtigan. Laakiin waxaa kale oo jira hawlo kale oo ka dabacsan oo aad aad ugu raaxaysan karto.
1 Ku lugaynta jardiinooyinka dabiiciga ah
2 Waddooyinka baaskiilka ee mara waddooyinka cagaaran
3 Wixii boqoshaada
Ku lugaynta jardiinooyinka dabiiciga ah
Dayrtu waxay na siisaa muuqaalo qurxoon taasina waxay ka dhigaysaa waqtiga ku habboon in la booqdo mid ka mid ah jardiinooyinka dabiiciga ah ee dalkeenna. Kuwani waxay sidoo kale na siiyaan waddooyin kala duwan markaa ma aha wax adag in la waafajiyo socodka sifaha kooxda.
Ma u baahan tahay xoogaa fikrado ah? Kuwa badan baa jira jardiinooyinka dabiiciga ah oo si gaar ah ugu qurux badan dayrta: Fraga de Catasós ee Pontevedra, Gorbeia ee Basque Country, Urbasa ee Navarra, Somiedo ee Asturias, Picos de Europa ee León, Montseny ee Catalonia, Arribes del Duero ee Zamora iyo Salamanca, Cazorla, Segura iyo las Villasyada ku yaal Jaén, Sierra Nevada ee Granada….
Haddii aad raacdo carruur Waxaad lugaynta ka dhigi kartaa mid lagu raaxeysto adigoo samaynaya wax fudud sida ururinta caleemaha dayrta, oo aad ku kala saartid codadka caleemohooda, kuwaas oo dayrta ka guuri doona cagaar ilaa jaale iyo casaan. Ka dib, waxaad dooran kartaa kuwa ugu fiican oo ku qallajin kartaa saxaafadda guriga lagu sameeyo si aad u samayso farsamooyin kala duwan jiilaalka.
Waddooyinka baaskiilka ee mara waddooyinka cagaaran
Isbeddelka caleenta oo loo beddelo huruud iyo ocher, waxaa jira waddooyin cagaaran oo is -beddelaya xilliga dayrta. Oo maxaad iyaga dib ugu ogaan weyday baaskiilka? Waxay leeyihiin baaskiiladu waa xagaaga laakiin heerkulka dayrta aad bay u fiican yihiin si aad ugu raaxaysato hiwaayaddan, miyaanad oggolayn?
Spain gudaheeda waxaa ka jira 2.000 kiiloomitir oo waddooyinka cagaaran ah, aqlabiyadooda ugu badan waxay ku raad -maraan waddooyinkii tareenka ee hore loo burburiyey. Markay raacayaan dariiqyadii waddooyinkii hore, badankoodu sidoo kale waa siman yihiin, sidaa darteed waxay qoyska oo dhan u yihiin socod wacan.
Waddada Sierra de la Demanda Greenway ee u dhaxaysa La Rioja iyo Burgos, Plazaola Greenway ee Navarra, Carrilet Greenway oo ka gudubta dooxooyinka gobolka fulkaanaha ee La Garrotxa, Oso Greenway ee Asturias iyo Greenway of Monfragüe ee Cáceres, waa uun soo jeedino .
Imaanshaha dayrta, xilli boqoshaada ee Spain bilaabmaa. Waqtigaan sanadka waa la soo ururin karaa boletus, morels, chanterelles, chanterelles, buunankii geerida ... Qaarkood waxay ku koraan geedka salka, qaarna waxay ku koraan alwaax iyagoo ku jira geeddi -socodkii burburka.
Raadinta boqoshaada, ururinta iyo karinta iyaga ayaa ah hab fiican oo aad dibedda waqti ugu qaadato. Mid kale oo ka mid ah waxqabadyada la sameeyo Dayrta oo kuu oggolaanaysa inaad kaligaa ku raaxaysato ama la joogtid dabeecadda. Kahor intaadan ku bilaabin, si kastaba ha noqotee, waa muhiim ah in la ogaado noocyada kala duwan iyo in la ogaado kuwa sumaysan iyo kuwa la cuni karo.
Waxaa jira noocyo badan oo fangaska iyo qaarkood waxay u dhiman karaan haddii la liqo sidaa darteed bilowga qof khabiir ku ah mawduuca wuxuu noqon karaa kaalmo weyn. Baro waxyaabaha daruuriga ah ka dibna ha joojin tababarka si aad u soo ururiso boqoshaada xilliyeed oo aad si habsami leh u cunto.
Beer ma leedahay? Ku raaxayso samaynta hawlaha caadiga ah ee wakhtigan sanadka. Ka saar dhir kasta oo jirran ama walxo dhir ah si looga hortago faafitaanka cayayaanka iyo cudurada. Intaas ka dib, gooyaa geedaha geedaha iyo geedaha cagaaran oo mari bacriminta dabiiciga ah.
Wakhtigan sannadka ayaa sidoo kale ku habboon in la beero nalalka tulip, hyacinth ama daffodil. Si nalalka dayrta iyo sanadlaha ubaxyada guga, waxaad u baahan doontaa inaad beerto dayrta. Waxaad kaloo abuuri kartaa ubax xilliyeed sida chrysanthemums, pansies ama heather oo qurxin doona beerta
Haa, dhanka kale, waxaad rabtaa inaad beerta bilowdoWaqtigaan waxaad ku beeri kartaa celery, basal, broccoli, dhir, karootada ama isbinaajka, iyo sidoo kale geedo udug ah sida valerian, rosemary, thyme ama dhir.
Midkee ka mid ah waxqabadyadaan la qaban doono xilliga dayrta ee aadka kuu soo jiita?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » 4 waxqabad oo la sameeyo Dayrta dibedda